Budata Ninja Madness APK maka Android
Budata Ninja Madness
Free Budata maka Android (23.00 MB)
Budata Ninja Madness,
Ninja Madness bụ egwuregwu ninja nke m chere na ndị egwuregwu toro eto ga-enwe mmasị igwu egwu nihi ihe ngosi pixel ya. Nadịghị ka ndị ọgbọ ya, egwuregwu ahụ, nke na-eme ka anyị dị ka ninja, bụ nefu na ikpo okwu gam akporo na, dịka ị nwere ike iche nechiche, dị ntakịrị na nha.
Negwuregwu ahụ, anyị na-agbalị ịkụ samurai okpukpu abụọ karịa nke anyị onwe anyị nime ọkwa 70, mana anyị anaghị ezute samurai ozugbo, nke na-eme ka anyị sie ike. Nke mbụ, a na-enye anyị ọzụzụ siri ike. Noge ọzụzụ, anyị na-eji ngwa agha pụrụ iche nke ninja dị ka kpakpando ninja, ma na-ezere ọnyà site na ịmegharị ha. Ọ dịkwa oke mkpa na anyị na-anakọta igodo ndị na-apụta noge usoro agụmakwụkwọ.
Anyị na-eji nnukwu bọtịnụ edobere ala iji chịkwaa agwa anyị na egwuregwu ahụ, nke na-atọ ụtọ na egwu Ninja.
Ninja Madness Ụdịdị
Nha faịlụ: 23.00 MB